ခရမ်းချဉ်သီးအစာသွပ် | Colourful Recipes
← Turkey Meat Ball
နံရိုး ၀က်သားနီချက် →
Turkey ခရမ်းချဉ်သီး အစာသွပ်ပေါင်း
ဇွန်းဖြင့် အတွင်းသားများကို ခပ်ထုပ်ပါ။
နောက်တမျိုး ဟင်းချက်သည့် နေရာမှာ သုံးလို့ရတာမို့ ရေခဲသေတာမှာ သိမ်းထားပါ။
မျက်နှာပြင် အညှိ … အသားများကို ဖြည့်ထည့်ပါ။
ဇကာကွက်ထဲ ထည့် ။
အိုးထဲမှာ အောက်ခံ ရေ ထည့်ပီး … အပေါ်က ဇကာကွက်တင် … ဇကာကွက်ပေါ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီး အစာသွပ်ထည့် ၊ အဖုံးအုပ်ပီး ပေါင်းပါ။
High Heat –7Minutes ~ 11 Minutes
By Thet Nandar • Posted in Steam Recipe, Thiriyatanar's Special, Turkey - Steam, Turkey Recipe	• Tagged ခရမ်းချဉ်သီး အစာသွပ်, colourful recipes blog, food, Turkey Recipe
One comment on “ခရမ်းချဉ်သီးအစာသွပ်”
August 18, 2012 @ 10:33 am
Love this recipe. Very easy to make and tasty as well. Thanks!